ချီတက်ပွဲ Float - Zigong အီယဉ်ကျေးမှု Co. , Ltd မှ
တစ်ဦးက float ထရပ်ကားနဲ့တူနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်သို့မဟုတ်အများအပြားပွဲလမ်းသဘင်စစ်ရေးပြ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်တဦးတည်း, နောက်ကွယ်မှဆွဲယူလာရသည်ဟုလည်းကောင်း, တစ်ဦးအလှဆင်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား flots ထိုကဲ့သို့သောဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံချီတက်ပွဲအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုကြသည်, goverment celebrtion, traditonal ဖြစ်ရပ်များ carnival.in, float ပန်းများသို့မဟုတ်အခြားစက်ရုံပစ္စည်းအတွက်လုံးဝအလှဆင်နေကြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Float ကတော့ float ၏ surface.this ကြင်နာအပေါ်အရောင်အထည်နှင့်အတူသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာပေါ်ဦးဆောင်ပြီးဆီမီးခွက် shap နှင့် bundle ဖို့သံမဏိကိုအသုံးပြုဖို့ပဲနေ့ခင်းဘက်မှာပြသရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ညမှာဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အ tradtional မီးအိမ်လက်ရာအကောင့်အဆင့်အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်နေကြ ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပို. ပို. ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်လက်ရာမကြာခဏ float အတွက်မီးအိမ်လက်ရာနှင့်ဖိုက်ဘာမှန်ပန်းပုနှင့်အတူ animatronis ထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ် floats.we အတွက်အသုံးချဖို့နေကြတယ်, float ဒီလိုမျိုးဧည့်သည်များမှကွဲပြားခြားနားသောအတှေ့အကွုံဆောင်ခဲ့ရမည်။
နေရပ်လိပ်စာ: No.1818 Huichuan လမ်းမကြီးနယူးခရိုင်, Zigong, စီချွမ်ပြည်နယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးအိမ်နှင့် animatronics အကြောင်းပိုမိုသိလိုကိုသင့်အီးမေးလ်ထားခဲ့ပါနဲ့ကျနော်တို့ 24 နာရီအတွင်းထိတွေ့ပါလိမ့်မည်ပါ။